IPark Farm Glamping - I-Airbnb
IPark Farm Glamping
Indlu encinci enamavili sinombuki zindwendwe onguLuke
I-Exclusive Shepherds hut ibekwe embindini wentsimi yeehektare ezi-2 ejikelezwe bubomi basendle nabasemaphandleni. Ngeembono ezimangalisayo kuyo yonke intlambo, ejonge kwiiNduli zeShropshire, i-Shepherds hut inayo yonke into oyifunayo ukonwabela indawo yaseBhritane ngokugqibeleleyo.
Ibekwe ngokufanelekileyo phakathi kweBridgnorth, iLudlow kunye neMuch Wenlock, yindawo efanelekileyo yokubaleka isibini esifuna ixesha loxinzelelo.
Yenziwe ngesandla yingcibi yalapha ekhaya, i-Hut yakhiwe kumgangatho ophezulu kakhulu, ukuze ukonwabele ukuhlala kwakho emaphandleni ukhululekile.
Uya kulala ngokuvakalayo kwi-sleigh bed entle, ukhuselekile kulwazi lokuba akuyi kubakho mhlaba ukhubekayo ebumnyameni, emva koko, kukho i-ensuite ene-high-tech composting loo, ishawa kunye ne-sink.
Ekuseni, isidlo sakusasa esonqenayo, esikhululekile sinokuphekwa ekhitshini kunye nesinki yaseBelfast yesiko kunye nesitovu.
Ngaphandle kwendlwana, yonwabela iimbono ezintle ngelixa usitya kwibhentshi yepikiniki, ukhumbula i-BBQ emnandi kunye neemarshmallows ezithosiwe kwindawo yomlilo ngobusuku obungaphambili.
*Ingxowa yezigodo kunye nokubasa indawo yokucima umlilo iyafumaneka ukuze ithengwe ngeendleko ezongezelelweyo.
Musa ukuzisa naziphi na izixhobo zasekhitshini, izinto zokulala, neetawuli njengoko zonke zinikiwe.
Yiza nokutya neziselo. Uya kufumana iibhegi zeti, ikofu ekhawulezileyo, iswekile, ityuwa kunye nepepile endlwini.
Ukuba ufuna izinto ezingakumbi, kukho ivenkile yelali yasekuhlaleni kodwa banestokhwe esilinganiselweyo kwaye abavulwa ngeeCawe. Kukho ibhokisi epholileyo kwindlwana egcwele imikhenkce. Iinkukhu zethu zinokukunika amaqanda amatsha!
Yiza nezihlangu ezomeleleyo okanye amaqula njengoko ingca imanzi kusasa kwaye, njengoko iyindawo encinci esebenzayo kunye nefama, kuya kufuneka kubekho udaka kwindawo ethile.
Yiza nezinto zangasese. Siza kubonelela ngesepha yesandla.
Uya kufumana inkululeko enkulu yokuziva ngathi untywiliselwe emaphandleni esiNgesi, nangona kunjalo, i-pub yasekhaya iphantsi komkhondo welali! Indawo yethu ephumelele imbasa, iPheasant e-Neenton, yi-1.42km kude kwaye kukuhamba ngemizuzu emi-5 kuphela ukuya kwivenkile yasekhaya. Iluncedo kakhulu! Amathuba okuhamba kwi-Shropshire Hills enhle ayinasiphelo, okanye kukho umbono omangalisayo ovela kwi-Hut ngokwayo ukuze ulahleke endaweni.
Umgaqo-nkqubo wethu we-Covid-19 unokufumaneka kwibhlog yethu.
Samkelekile ukuba sikuncede ngeemfuno zakho